Nhau - Kushandiswa kweANSYS Parameter Optimization uye Pamwe Dhizaini pane Ultrasonic Welding runyanga
Tidaidzei: +86 15658151051
Nekuvandudzwa kweiyo ultrasonic tekinoroji, mashandisirwo ayo ari kuwanda uye akawandisa, inogona kushandiswa kuchenesa tunhu tudiki tudiki, uye inogona zvakare kushandiswa kunyorera simbi kana plastiki. Kunyanya muzvigadzirwa zvemazuva ano zvepurasitiki, kuwelda yehtrasonic inowanzoshandiswa, nekuti iyo dhizaini yakasiyiwa, iyo chitarisiko chinogona kuve chakakwana, uye basa rekudzivirira mvura uye kusunga guruva kunopihwawo. Dhizaini yepurasitiki yekumonera runyanga ine zvakakosha pamagumo ekupedzisira ekushambidza mhando uye gadzira kugona. Mukugadzirwa kwemamita emagetsi matsva, mafungu e ultrasonic anoshandiswa kupamhidzira kumeso nekumusoro kumeso pamwechete. Zvisinei, panguva yekushandiswa, zvinowanikwa kuti mamwe maturusi akaiswa pamushini uye akatsemuka uye kumwe kukundikana kunoitika munguva pfupi. Mimwe midziyo yekumisikidza midziyo Chiyero chehurema chakakwira. Zvikanganiso zvakasiyana zvakakanganisa zvakanyanya mukugadzirwa. Zvinoenderana nekunzwisisa, vatengesi vemidziyo vane mashoma dhizaini yekushandisa ekushandisa, uye kazhinji kuburikidza nekudzokorora kugadziriswa kuzadzisa dhizaini dhizaini. Naizvozvo, zvinodikanwa kushandisa yedu pachedu tekinoroji kuvandudza yakasimba tiraira uye inonzwisisika dhizaini nzira.
2 Ultrasonic epurasitiki Welding musimboti
Ultrasonic epurasitiki yekumonera inzira yekugadzirisa iyo inoshandisa musanganiswa weiyo thermoplastics mune yakakwira-frequency kumanikidzwa vibration, uye iyo yekumisikidza nzvimbo inokweshana ichipesana kuti ibudise yemuno-tembiricha yakanyungudika. Kuti uwane zvakanaka zvema ultrasonic welding mhedzisiro, zvishandiso, zvishandiso uye maitiro parameter anodikanwa. Inotevera inongedzo ipfupi kune hwayo.
2.1 Ultrasonic epurasitiki Welding system
Mufananidzo 1 ndeye schematic maonero eiyo welding system. Simba remagetsi rinopfuura nemumagetsi jenareta uye gudzazwi remagetsi kuburitsa chiratidzo chinoshandura chemagetsi cheiyo ultrasonic frequency (> 20 kHz) inoiswa kune iyo transducer (piezoelectric ceramic). Kuburikidza netransducer, simba remagetsi rinova simba remuchina vibration, uye iyo amplitude yemakaniki vibration inogadziriswa nehwamanda kune yakakodzera kushanda amplitude, uyezve zvakaenzana zvinopfuudzwa kune izvo zvakasangana nazvo kuburikidza nazvo kuburikidza nechishandiso musoro (welding kushandisa). Idzo nzvimbo dzekubata dzezvinhu zviviri zvekuwisira zvinhu zvinoiswa kune yakanyanya-frequency kumanikidzwa vibration, uye iko kukakavara kupisa kunogadzira yemuno tembiricha yakanyungudika. Mushure mekutonhora, izvo zvinhu zvinosanganiswa kuti zviwane kuwelda.
Mune welding system, chiratidzo sosi chikamu chedunhu chine simba gudzazwi redunhu iro frequency kugadzikana uye kugona kugona kutyaira kunoitisa mashandiro emuchina. Izvo zvinhu i thermoplastic, uye dhizaini yenzvimbo yekubatana inoda kufunga maitiro ekukurumidza kugadzira kupisa nedoko. Transducers, nyanga nemidziyo yemidziyo zvese zvinogona kutariswa semishini yekumisikidza kuongorora kuri kubatanidza kudedera kwavo. Mupurasitiki yekutengesa, mechanical vibration inoparidzirwa nenzira yemafungu ekureba. Maitiro ekunyatso chinja simba uye kugadzirisa iyo amplitude ndiyo yakakosha poindi yekugadzira.
2.2 Chishandiswa musoro (Welding tooling)
Iyo turu yemusoro inoshanda seyehukama yekutaurirana pakati peiyo ultrasonic yekutengesa muchina uye izvo zvinhu. Basa rayo guru nderekuendesa kureba kwemuchina vibration yakaburitswa neiyo variator zvakaenzana uye zvinobudirira kune izvo zvinhu. Izvo zvinoshandiswa zvinowanzo kuve zvemhando yepamusoro aluminium alloy kana kunyangwe titanium alloy. Nekuti dhizaini yezvinhu zvepurasitiki inoshanduka zvakanyanya, chitarisiko chakasiyana zvakanyanya, uye musoro wechishandiso unofanirwa kuchinja zvinoenderana. Maumbirwo enzvimbo yekushanda anofanirwa kunge achienderana neicho chinhu, kuti arege kukuvadza plastiki kana ichidedera; panguva imwecheteyo, yekutanga-kuraira kwenguva refu vibration yakasimba frequency inofanirwa kuratidzwa pamwe nekuburitsa kweyakawandisa yemuchina wekutemesa, zvikasadaro simba rekudengenyeka richapedzwa mukati. Kana chishandiso chemusoro chazunguzika, kunetseka kwenzvimbo kunoitika. Maitiro ekugadzirisa izvi zvivakwa zvemuno zvakare dhizaini kufunga. Ichi chinyorwa chinoongorora maitiro ekushandisa ANSYS dhizaini maturu misoro yekugadzirisa dhizaini dhizaini uye ekugadzira mamirire.
3 Welding tooling dhizaini
Sezvambotaurwa, dhizaini yeiyo yekunamatira tooling yakakosha. Kune akawanda emagetsi emagetsi ekushambadzira muChina anogadzira avo ekushongedza maturusi, asi chakakura chikamu chazvo kutevedzera, uyezve ivo vari kugara vachicheka uye kuyedza. Kubudikidza neiyi inodzokororwa nzira yekugadzirisa, kubatana kwekushandisa uye kuwanda kwemidziyo kunowanikwa. Mune bepa iri, iyo inogumira element nzira inogona kushandiswa kuona kuwanda paunenge uchigadzira iyo yekushandisa. Yekushandisa yekuyedza mhedzisiro uye dhizaini yekukanganisa kukanganisa ingori 1%. Panguva imwecheteyo, bepa iri rinoburitsa pfungwa yeDFSS (Dhizaini Yechitanhatu Sigma) kugadzirisa uye kusimba dhizaini yekushandisa. Pfungwa ye6-Sigma dhizaini ndeyekuunganidza zvizere izwi remutengi mune dhizaini dhizaini yekugadzira; uye pre-kutarisisa kweanogona kutsauka mune yekugadzira maitiro kuona kuti mhando yeyekupedzisira chigadzirwa ichigovaniswa mukati meyakaenzana chikamu. Iyo dhizaini yekuratidzira inoratidzwa muMufananidzo 2. Kutanga kubva mukugadzirwa kwezviratidzo zvekugadzira, chimiro uye zviyero zvekushandisa zvinotanga kugadzirwa zvinoenderana neruzivo rwuripo. Iyo parametric modhi inosimbiswa muANSYS, uyezve iyo modhi inotemerwa neyekufananidza kuyedza dhizaini (DOE) nzira. Maparamende akakosha, zvinoenderana nezvinodiwa zvine simba, sarudza kukosha, uye wozoshandisa nzira yediki-dambudziko kugadzirisa mamwe ma parameter. Tichifunga nezve simba rezvinhu uye eparameter yezvakatipoteredza panguva yekugadzira uye kushandiswa kweiyo tooling, yakave yakagadzirwawo nemashiviriro kusangana nezvinodiwa zvemitengo yekugadzira. Chekupedzisira, iyo yekugadzira, bvunzo uye bvunzo dzidziso dhizaini uye chaiko kukanganisa, kusangana nemagadzirirwo zviratidzo anonunurwa. Iyi inotevera nhanho-nhanho yakadzama sumo.
3.1 Geometric chimiro dhizaini (kuumba parametric modhi)
Kugadzira iyo yekushongedza maturu kutanga inotarisa ayo anofungidzirwa ejometri chimiro uye chimiro uye inogadza parametric modhi yekuzotevera ongororo. Mufananidzo 3 a) ndiwo magadzirirwo echinhu chakanyanya kuwanda, izvo magero akavhurika akafanana neU akavhurwa nenzira yekuzungunuka pane chakakomberedza cuboid. Izvo zviyero zvakaenzana ndehurefu hwe X, Y, uye Z madhairekisheni, uye iwo ekumashure ekuyera X uye Y anowanzo fananidzwa nehukuru hweiyo workpiece iri kusunganidzwa. Kureba kweZ kwakaenzana nehafu wavelength yeiyo ultrasonic wave, nekuti mune yechinyakare vibration dzidziso, yekutanga-odhiyo axial frequency yechinhu chakasimudzwa chinotariswa nehurefu hwayo, uye iyo hafu-wave kureba inonyatsoenderana neacoustic frequency frequency. Dhizaini iyi yakawedzerwa. Use, inobatsira pakupararira kwemasaisai ezwi. Chinangwa cheiyo U-yakaumbwa groove ndeye kudzora kurasikirwa kweiyo lateral vibration yeiyo yekushandisa. Chinzvimbo, saizi uye nhamba zvakatemwa zvinoenderana nehukuru hwese hwekushandisa. Zvinogona kuonwa kuti mune ino dhizaini, pane mashoma ma parameter anogona kudzorwa zvakasununguka, saka takaita shanduko pane iyi hwaro. Mufananidzo 3 b) chishandiso chakangogadzirwa icho chine imwe saizi paramende pane echinyakare dhizaini: yekunze arc radius R. Pamusoro pezvo, iyo groove yakanyorwa pane inoshanda pamusoro peiyo tooling kuti ishandire pamwe nepamusoro pepurasitiki workpiece, izvo zvinobatsira kupfuudza vibration simba uye kuchengetedza iyo workpiece kubva mukukuvara. Iyi modhi inogara ichienzanisirwa nenzira yeANSYS, uyezve inotevera dhizaini yekuyedza.
3.2 DOE yekuyedza dhizaini (kutsunga kwakakosha parameter)
DFSS inogadzirirwa kugadzirisa anoshanda enjiniya matambudziko. Iyo haiteedzere kukwana, asi inoshanda uye yakasimba. Inosanganisira iyo pfungwa ye6-Sigma, inobata kupokana kukuru, uye inosiya "99.97%", uku ichida kuti dhizaini ive inopesana nekusiyana kwezvakatipoteredza. Naizvozvo, usati wagadzira iyo paramende optimization, inofanira kutanga yatariswa, uye saizi ine yakakosha pesvedzero pane chimiro inofanirwa kusarudzwa, uye hunhu hwavo hunofanirwa kutemerwa zvinoenderana nesimba rekusimba.
3.2.1 DOE paramende yekumisikidza uye DOE
Iyo dhizaini dhizaini ndiyo yekumisikidza chimiro uye saizi chinzvimbo cheU-yakaumbwa groove, nezvimwewo, huwandu hwesere. Chinongedzo paramende ndiyo yekutanga-odhiyo axial vibration frequency nekuti ine simba rakakura pane weld, uye iyo yakanyanya kukoshesa kushushikana uye mutsauko mukushanda kwepamusoro amplitude inogumira sekusiyana kwenyika. Zvichienderana neruzivo, zvinofungidzirwa kuti mhedzisiro yemiparameter pamhedzisiro yakaenzana, saka chinhu chimwe nechimwe chinogadzirirwa pamatanho maviri, akakwirira uye akaderera. Iyo rondedzero yemiparamendi uye anoenderana mazita ndeinotevera.
DOE inoitwa muANSYS uchishandisa iyo yakatangwa parametric modhi. Nekuda kwekukanganisa kwesoftware, yakazara-chinhu DOE inogona kushandisa chete kusvika pamatanho manomwe, nepo modhi ine 8 paramita, uye ANSYS kuongororwa kwemhedzisiro yeDOE haina kukwana senge yehunyanzvi 6-sigma software, uye haigone kubata kudyidzana. Naizvozvo, isu tinoshandisa APDL kunyora DOE chiuno kuverenga uye kubvisa mhedzisiro yechirongwa, uye nekuisa iyo data muMinitab kuti iongororwe.
3.2.2 Kuongororwa kwemhedzisiro yeDOE
Minitab's DOE ongororo inoratidzwa muMufananidzo 4 uye inosanganisira iyo huru inokonzeresa kuongorora pamwe nekudyidzana kuongorora. Iyo huru inokonzeresa yekuongorora chinhu inoshandiswa kuona kuti ndedzipi dhizaini shanduko dzine hunyanzvi pane iyo chinongedzo chinoshanduka, zvichidaro zvichiratidza kuti ndeapi akakosha magadzirirwo akasiyana. Iko kudyidzana pakati pezvinhu kunobva kwaongororwa kuona danho rezvinhu uye kudzikisa chiyero chekubatanidza pakati pezvakasiyana dhizaini. Enzanisa mwero wekuchinja kwezvimwe zvinhu kana dhizaini yakakwira kana yakaderera. Zvinoenderana neiyo yakazvimirira axiom, iyo yakanakisa dhizaini haina kubatanidzwa kune mumwe nemumwe, saka sarudza iyo nhanho isinganyanyi kusiyanisa.
Mhedzisiro yekuongorora kweyekushandisa yekumisikidza mune ino bepa ndeiyi: akakosha dhizaini parameter ndeyekunze arc radius uye iyo slot upamhi hwekushandisa. Iyo nhanho yezvikamu zviviri iri "yakakwira", ndiko kuti, nharaunda inotora kukosha kwakakura muDOE, uye iyo groove upamhi inotorawo kukosha kwakakura. Iwo akakosha ma parameter uye kukosha kwavo kwakatemwa, uyezve mamwe akati wandei parameter akashandiswa kukwidzirisa dhizaini muANSYS kugadzirisa frequency yekushandisa kuti ifanane neiyo frequency yekushandisa yemuchina wekutema. Iyo optimization maitiro ndeinotevera.
3.3 Target parameter optimization (yekushandisa frequency)
Iyo paramende marongero ekugadzirisa dhizaini akafanana neayo eDOE. Musiyano uripo ndewekuti kukosha kwezvikamu zviviri zvakakosha kwakatemwa, uye mamwe matatu matatu ane hukama nezvinhu zvemukati, izvo zvinoonekwa senge ruzha uye hazvigone kugadziridzwa. Matatu paramende akasara anogona kugadziridzwa ndiwo axial nzvimbo yeslot, kureba uye upamhi hwekushandisa. Iyo optimization inoshandisa iyo subproblem yekufungidzira nzira muANSYS, inova nzira inoshandiswa zvakanyanya mumatambudziko einjiniya, uye iyo chaiyo nzira inosiyiwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kushandisa frequency seyakanangana kusiana kunoda hunyanzvi hushoma mukushanda. Nekuti pane akawanda dhizaini parameter uye akasiyana akasiyana misiyano, nzira dzekudengenyeka dzekushandisa dzakawanda muhuwandu hwehuwandu hwekufarira. Kana mhedzisiro yekuongororwa kwemodal ikashandiswa zvakananga, zvinonetsa kuwana yekutanga-odhiyo axial modhi, nekuti modal kuteedzana kwekuregedza kunogona kuitika kana ma parameter achinja, ndiko kuti, echisikigo frequency ordinal inoenderana neyekutanga modhi shanduko. Naizvozvo, bepa rino rinotora ongororo yemodal kutanga, uyezve rinoshandisa modal yekumisikidza nzira kuwana iyo frequency mhinduro curve. Nekutsvaga iyo yepamusoro kukosha kweiyo frequency mhinduro curve, inogona kuve inoenderana inoenderana modal frequency. Izvi zvakakosha kwazvo mune otomatiki optimization maitiro, kubvisa kudiwa kwemanyore kuona modality.
Mushure mekugadzirisa kwapera, dhizaini yekushanda frequency yekushandisa inogona kuve padhuze nepakati pechinangwa, uye iko kukanganisa kuri kushoma pane kukosha kwekushivirira kunotsanangurwa mukugadzirisa. Panguva ino, dhizaini yekushandisa inonyatso tsanangurwa, ichiteverwa neyekugadzira mamirioni ekugadzira dhizaini
3.4 Kushivirira dhizaini
Iyo yakajairika dhizaini dhizaini inopedzwa mushure mekugadzirwa kwematanho ese, asi pamatambudziko einjiniya, kunyanya kana uchifunga nezve mutengo wekugadzirwa kwakawanda, kushivirira dhizaini kwakakosha. Mutengo wekushomeka kwakaringana wakadzikiswa, asi kugona kusangana nemametric metric kunoda kuverenga kwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu. Iyo PDS Pangangoita Dhizaini Sisitimu muANSYS inogona kuongorora zvirinani hukama pakati pekugadzira paramende shiviriro uye kunongedzera paramende shiviriro, uye inogona kuburitsa yakazara yakazara inowirirana mushumo mafaira.
3.4.1 PDS marongero eparamende uye kuverenga
Zvinoenderana nepfungwa yeDFSS, kuongororwa kwekushivirira kunofanirwa kuitwa pamatanho akakosha ekugadzira, uye kumwe kutsungirira kwakawanda kunogona kutsanangurwa zvine simba. Mamiriro ezvinhu mupepa iri akakosha, nekuti zvinoenderana nekugona kwemuchina, kubvumidza kwekugadzira kwemajometri dhizaini dhizaini kudiki kwazvo, uye hakune chekuita nezuro rekupedzisira; nepo parameter yezvinhu zvakagadzirwa zvakasiyana zvakanyanya nekuda kwevanopa, uye mutengo wezvinhu zvakagadzirwa unogadzira Zvinopfuura makumi masere muzana% zvekushandisa kugadzira mutengo. Naizvozvo, zvinodikanwa kuseta inonzwisisika shiviriro renji kune izvo zvinhu zvivakwa. Izvo zvinoenderana nezvinhu zvemukati pano kuwanda, modulus yekusimba uye kumhanyisa kweruzha wave kupararira.
Kushivirira kuongororwa kunoshandisa zvisina kujairika Monte Carlo kuenzanisa muANSYS kuyedza nzira yechiLatin Hypercube nekuti inogona kuita kuti kugoverwa kwemapoinzi esampuli kuve yunifomu uye zvine musoro, uye uwane kuwirirana kuri nani nemapoinzi mashoma. Iri bepa rinoisa mapoinzi makumi matatu. Fungidzira kuti kushivirira kwetatu parameter yezvinhu kunogoverwa zvinoenderana naGauss, kutanga kupihwa muganho wepamusoro uye wezasi, uye wozoverengerwa ANSYS.
3.4.2 Kuongororwa kwemhedzisiro yePDS
Kubudikidza nekuverenga kwePDS, zvirevo zvinowirirana zvinoenderana nemakumi matatu esampuli zvinopihwa. Kugovaniswa kwezvakanangana zvinongedzo hazvizivikanwe. Ma parameter akaiswa zvakare achishandisa Minitab software, uye kuwanda kwacho kunogovaniswa zvinoenderana neyakajairwa kugovera. Izvi zvinovimbisa iyo nhamba yehunyanzvi yekushivirira kuongororwa.
Kukarukureta kwePDS kunopa fomura inokodzera kubva pamusiyano wekushanduka kusvika pakuwedzera kwekushivirira kwechinangwa chakanangana: iko y ndiko kusiyanisa kunongedzera, x ndiko kusiyanisa kwekugadzira, c ndiko kuenderana kwakaringana, uye ini ndiyo nhamba inoshanduka.
Zvinoenderana neizvi, kushivirira kwekuvavarira kunogona kupihwa kune yega dhizaini dhizaini kupedzisa basa rekushivirira dhizaini.
3.5 Kuongorora kwekuyedza
Chikamu chepamberi dhizaini yedhizaini yese yekutungidza. Mushure mekupedzwa, izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinotengwa zvinoenderana neyakareruka zvinhu zvinobvumidzwa nedhizaini, zvobva zvatumirwa mukugadzira. Frequency uye modal kuyedza kunoitwa mushure mekugadzira kugadzirwa, uye iyo bvunzo nzira inoshandiswa ndiyo yakapusa uye inoshanda kwazvo sniper bvunzo nzira. Nekuti iyo inonyanya kunetseka indekisi ndiyo yekutanga-odhiyo axial modal frequency, yekumhanyisa sensor inosungirirwa kune inoshanda nzvimbo, uye imwe mugumo inorohwa ichitevedza axial rairo, uye iyo chaiyo frequency yeiyo yekushandisa inogona kuwanikwa nekutarisa kwespecral. Iwo mhedzisiro mhedzisiro yedhizaini i14925 Hz, bvunzo mhedzisiro ndeye 14954 Hz, iyo frequency resolution iri 16 Hz, uye iyo yepamusoro kukanganisa iri pasi pe1%. Zvinogona kuonwa kuti iko kwechokwadi kweyekupedzesa element simulation mune iyo modal kuverenga iko kwakanyanya kwazvo.
Mushure mekupasa iyo yekuyedza bvunzo, iyo yekushandisa inoiswa mukugadzira uye kuungana pane iyo ultrasonic yekutengesa muchina. Mamiriro ezvinhu anoita zvakanaka. Basa racho rave rakagadzikana kweinopfuura hafu yegore, uye iwo mwero wekudzidzira iwo wakakwira, uyo wakapfuura hupenyu hwemwedzi mitatu yebasa hwakavimbiswa neyakajairika michina yekugadzira. Izvi zvinoratidza kuti dhizaini iri kubudirira, uye maitiro ekugadzira haana kudzokororwa nekugadziriswa, kuchengetedza nguva uye manpower.
Iri bepa rinotanga nenongedzo yeiyo yakakwenenzverwa epurasitiki yekutenderera, inobata zvakadzama tarisiro yehunyanzvi yekutenderera, uye inofungidzira dhizaini dhizaini yekushandisa nyowani. Wobva washandisa yakasimba simulation basa rechinhu chinogumira kuongorora dhizaini zvine mutsindo, uye nekuzivisa iyo 6-Sigma dhizaini dhizaini yeDFSS, uye kudzora akakosha magadzirirwo parameter kuburikidza neANSYS DoE yekuyedza dhizaini uye kuongororwa kwePDS kushivirira kuti uwane dhizaini yakasimba. Chekupedzisira, iyo yekushandisa yakanyatsogadzirwa kamwe chete, uye dhizaini yacho yainzwisisika neyekuyedza frequency bvunzo uye iko iko kwechokwadi kugadzirwa kwekuongorora. Izvo zvakare zvinoratidza kuti iyi seti yema dhizaini nzira inogoneka uye inoshanda.